Hello Nepal News » बार्सिलोनालाई चिन्ता : मेस्सी र डे जोङमाथि ‘इएल क्लासिको’मा प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने !
बार्सिलोनालाई चिन्ता : मेस्सी र डे जोङमाथि ‘इएल क्लासिको’मा प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने !
एजेन्सी, चैत २३
स्पेनिस फुटबल क्लब बार्सिलोनाका प्रमुख खेलाडी तथा कप्तान लिओनल मेस्सीले सिजनको दोस्रो इएल क्लासिको गुमाउने खतरा बढेको छ । त्यसैगरी, टोलीको मिडफिल्डका प्रमुख खेलाडी फ्रेन्क डे जोङले भने कट्टर प्रतिस्पर्धी रियल मड्रिडविरुद्ध हुने सिजनको दोस्रो खेल गुमाउने खतरा छ । दोस्रो इएल क्लासिको आगामी शनिबार राति रियल मड्रिडको घरेलु मैदानमा हुँदैछ । यसअघि भएको पहिलो क्लासिकोमा रियलले बार्सिलोनालाई उसकै घरमा १–३ ले हराएको थियो ।
अर्को साता हुने दोस्रो क्लासिकोअघि आज राति बार्सिलोनाले लिगको २९औं खेल आफ्नो मैदानमा १६औं स्थानको रियल भाल्लाडोलिडविरुद्ध खेल्दा २ जना खेलाडी प्रतिबन्धको उच्च जोखिममा रहेका छन् । यदि आज राति मेस्सी र डे जोङमध्ये कोही एक वा दुवैले एक पहेंलो कार्ड पाए उनीहरूमाथि रियल मड्रिडविरुद्धको निर्णायक र प्रतिक्षाको खेलमा प्रतिबन्ध लाग्ने पक्का छ । सो खेलमा २ जना प्रमुख खेलाडी सम्भावित प्रतिबन्धको खतरामा छन् ।
किनभने, कप्तान मेस्सी र डे जोङले यो सिजन ला लिगामा हालसम्ममा समान ४–४ पहेंलो कार्ड पाइसकेका छन् । यदि आज राति थप एक कार्ड पाएका उनीहरूले रियल मड्रिडविरुद्धको खेल गुमाउने पक्का छ । युरोपमा शीर्ष लिगमा पाँच पहेंलो कार्ड पुगेपछि त्यसपछिको एक खेलमा प्रतिबन्ध लाग्ने नियम छ । मेस्सी र डे जोङ दुवै यो जोखिमबीच आज राति खेल्दा टोलीमा हुनेछन् । यो बार्सिलोनाका लागि निकै जोखिमपूर्ण खेल हुने पक्का छ ।
टोलीका दुईजना प्रमुख खेलाडी सम्भावित प्रतिबन्धको खतरामा भए पनि प्रशिक्षक रोनाल्ड कोम्यानले आज रातिको खेलमा मेस्सी र डे जोङ दुवैलाई सुरुआतबाटै उतार्ने तयारी गरेका छन् । आज रातिको खेल जितेर लिग लिडर एथ्लेटिको मड्रिडसँगको अंक दूरी १ मा छोट्याउने सुनौलो अवसर रहेकाले कोम्यान त्यसका लागि मेस्सीबिना जोखिम मोल्ने पक्षमा छैनन् । बार्सिलोनालाई उपाधि होडमा अघि बढ्न र एथ्लेटिकोमाथि दबाब बढाउन आजको खेल ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ ।
यदि आजको खेल जितेर अंक दूरी १ मा छाट्याउन सके अर्को खेलमा इएल क्लसिको हुँदा बार्सिलोना उच्च मनोबलमा हुन् । बार्सिलोनाका लागि उपाधि होडमा आफ्नो दाबेदारी कुन स्तरबाट दिने भन्नका लागि आज रातिको खेल र क्लािसको मुख्य खेल हुन् । यी दुवै खेल जितेर रियल मड्रिडलाई पछि पार्दै स्पष्ट रूपमा अघि बढ्ने दाउमा बार्सिलोना छ भने एथ्लेटिकोमाथि पनि उसले नजिकबाट दबाब बढाउनेछ ।
यस्तो अवस्थामा रहेको बार्सिलोनाले सम्भावित पाँचौं पहेंलो कार्ड र प्रतिबन्धलाई बचाउन के आज मेस्सी र डे जोङलाई आराम दिने निर्णय गर्लान् ? यो सम्भावना न्यून छ । खेलअघि मिडियासँग कुरा गर्दै प्रशिक्षक कोम्यानले भाल्लाडोलिडविरुद्ध मेस्सी र डे जोङ खतरामा रहने भए पनि सम्हालिएर ध्यानपूर्वक खेल्नुपर्ने बताएका थिए । यसको अर्थ कोम्यानले त्यसपछि मनस्थिति नबदले आज राति प्रतिबन्धको जोखिमबीच पनि मेस्सी र डे जोङ दुवैलाई सुरुआतबाटै मैदान उत्रार्ने सम्भावना प्रबल छ । जारी सिजन मेस्सीले ला लिगामा २७ खेलबाट २३ गोल र ८ गोलमा असिस्ट पनि गरेका छन् ।
हाल ला लिगाको अंक तालिकामा एथ्लेटिको मड्रिड २९ खेलपछि ६६ अंकका साथ शीर्ष स्थानमा रहँदा २९ खेल खेलेको रियल मड्रिड ६३ अंकका साथ दोस्रो स्थानमा रहेको छ । २८ खेल खेलेको बार्सिलोना ६२ अंकका साथ तेस्रो स्थानमा छ । ताजा अवस्थामा बार्सिलोना एथ्लेटिकोभन्दा ४ अंकले पछि छ भने रियलभन्दा मात्रै १ अंकले छ । आज राति जिते उसले रियललाई २ अंकले पछि पार्दै दोस्रो स्थानमा चढ्दा एथ्लेटिकोसँग दूरी १ को झिनो अन्तरमा झर्नेछ ।
📰 [MD] | Messi and De Jong, in danger of missing El Clásico on Saturday
Koeman will start them against Valladolid despite both being one yellow card away from suspension
Jaime Latre is set to officiate,areferree who hasn't hesitated to caution Messi in the past pic.twitter.com/mmHi5pUCT0
— BarçaTimes (@BarcaTimes) April 5, 2021
प्रकाशित मिति २३ चैत्र २०७७, सोमबार ०६:४८